>သိဟ်ရာသီခရီးသည် | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ကဗျာလေးတွေ, စုံစီနဖာ — 19 Comments	August 11, 2009
”သိဟ်”ဆိုတဲ့ ရာသီလေးကို အရမ်းကိုသဘောကျ နှစ်ချိုက်မိပါတယ်။ဒီရာသီလေးရောက်ရင် မနက်ခင်း မိုးရေငွေ့လေးတွေ ဝေနေတဲ့ နံနက်ခင်းလေးအောက်မှာ အေးမြတဲ့ လေပြေလေညင်းတွေကို ရှုရိုက်ရတဲ့ အရသာလေးကို မက်မောတွယ်ရှခဲ့ဖူးတယ်။တခါတလေဆို နံနက်ခင်းလေးတွေမှာ မိုးစက်မိုးပေါက်ကလေးတွေကို လက်နဲ့ခံယူဆော့ကစားရင်း အမေ့အိမ်လေးနားက အင်းယားကန်ဘောင်ကြီးပေါ် ထိုင်ငေးနေခဲ့ရတဲ့ လောကကြီးကလည်း တသက်မမေ့ကောင်း နိုင်စရာတွေပါပဲဗျာ။
အခုထိတောင် အမေ့အိမ်လေးမှ ခွဲထွက်လာရပေမယ့် ဒီလလေးရောက်ရင် အိမ်ကိုတော့ မရောက်ရောက်အောင်ကို ခြေဦးလှည့်ခဲ့တယ်။မိုးတွေ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာချနေတဲ့ ဝါခေါင်မိုးလေးတွေကို နှစ်သက်လို့လေ။မိုးလရာသီတွေများတဲ့ ကျွန်တော့်ချက်ကြွေခဲ့တဲ့ မြေကလေးမှာ အခြားမိုးလတွေထက် သိဟ်ရာသီ ဝါခေါင်မိုးလေးကို ပိုပြီးသဘောကျမိတယ်။ ဒီလလေးက အရင်ထဲက ကျွန်တော့်အပေါ် သက်ရောက်မှုတွေပေးတဲ့ လရာသီလေးပါ။
သိဟ်ရာသီတွေရဲ့ နံနက်ခင်းလေးတစ်ခုက ကျွန်တော်ရဲ့ “သိဟ်ရာသီအော်ရီဂျီနေးရှင်း“(Leo Origination)လေ။ဆောင်းရာသီလို နှင်းမကျပေမယ်လဲ မိုးစက်တွေကြောင့် မြူတွေလိုဝေနေတဲ့ ဒီရာသီရဲ့ နံနက်ခင်းလေးတွေဟာ ချမ်းအေးနေပြီး နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ကလေးက တွက်ပေါ်လာရပေမယ့်လဲ သူရဲ့အနွေးဓာတ်ကလေးက သိဟ်ရာသီရဲ့ဝတ်ရုံကို လွှမ်းခြုံထားတဲ့ နံနက်ခင်းအအေးဒဏ်ကို ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်း မဲ့နေတယ်လေ။ သိဟ်ဆိုတဲ့ စကားကို ကြိုက်တယ်။ရဲရင့်တယ်၊ပြတ်သားတယ်၊အားမာန်အပြည့်နဲ့ ထည်ဝါခမ်းနားတယ်။
ဒီလိုနံနက်ခင်း နေမင်းကြီးဆီမှ အလင်းရောင်ရဲ့အေးချမ်းမှုတွေ ကြားထဲမှာ ပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ ကားယားကောင်လေးရဲ့ စတင်ခြင်းဟာ အမည်နာမလေးတစ်ခုနဲ့ ရှင်သန်လာရတာ အခုဆိုရင် နှစ်ဆယ်ကိုးကြိမ်မြောက် သိဟ်ရာသီလေးနှင့် ခရီးရှည်သွားခြင်းဟာ အတော်ကို ဝေးလံလာပါပြီ။ ဘယ်ဆီဘယ်ရာသီတွေထိ ရတုနဲ့ချီပြီး ခရီးဆက်ရဦးမယ်ဆိုတာကို ဂဂနနမသိရသေးတဲ့ ခရီးသည်တစ်ဦးပေါ့။ပါရမီဖြည့်ဘက်ကလေးနဲ့ ကံ၏ကြမ္မာစေရာကို မငြင်းဆန်ဝံ့ပဲ ကြိတ်မှိတ်ပြီး နှင်လေဦးပေါ့ “သိဟ်ရာသီခရီးသည်“ရေ။
သီဟရာဇာပေမယ့်မြင့်မြတ်တဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ရစ်သိုင်းသံယောဇဉ် အပြည့်အလျှံနဲ့နှလုံးသားရှုထောင့် တနေရာကနေဦးဆောင်ချီတက်နေတယ်လေ။
သိဟ်လရာသီဟာ မီးပြရုပ်ကြောင့်ထင်တယ် ကမ္ဘာကြီးကို အတော်ပင် ပူလောင်မှုတွေ အတော်ပင်ရှိခဲ့ပါတယ်။၆.၀၈.၁၉၄၅မှာဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးကတုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုကြီးဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်တွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ ဟီရိုရှီးမားကို အနုမြူဗုံးကို ကြဲခဲ့တာကြောင့် ဂျပန်လူမျိုးပေါင်းများစွာဟာ သေကြေခဲ့ရပြီး စစ်ကိုလဲ ရွံမုန်းနာကြည်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပူလောင်ခဲ့ကြရပေမယ့်လဲ ခြင်္သေ့သတ္တိနဲ့ အားမာန်တွေလဲ အပြည့်ရှိပါတယ်။ဒီအားမာန်တွေကလဲ လောကကြီးမှာ တနည်းနည်းနဲ့ကို အရောင်တွေပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ ပေးဆပ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတည်ငြိမ်လေးနက်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်ပေမယ့်ခေါင်းမာတတ်တဲ့ အကျင့်ကဆိုးသေး။
ခြင်္သေ့ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း နေမင်းစိုးမိုးပြီး စုံရာသီ၊ မီးရာသီ တေဇောဓါတ်၊ ယောင်္ကျားရာသီ၊ ထိရရာသီ၊ အမြူရာသီ၊ တိရိစ္ဆာန်ရာသီ၊ ခြေလေးချောင်း ရာသီ၊ ၀ိသမရာသီ၊ ပါပဂြိုလ်သည် ဒက္ခိဏယဉ်စွန်းတန်းသို့ ကျရောက်သဖြင့် ဂြိုလ်သွား ဂြိုလ်လာများနဲ့ ထူးခြားသော ပုပ္ပနမိတ်များနဲ့ ဇာတာခွင်ရှိပြီး ရာသီခွင်သင်္ကေတ(Zodic sign)အားဖြင့် ( ♌)ဟု ဖေါ်ပြကြသည်။
ကေသရာဇာခြင်္သေ့တွေမို့ ….အတိုက်အခိုက်တွေက ရိုက်ပုတ်လာတယ်။အနှောင့်အယှက်တွေက အလည်လာတယ်။အခက်အခဲတွေက ခရီးဦးကြိုပြုတယ်။
ဗမာ့ရိုးရာပြက္ခဒိန်အရ ဝါခေါင်လနှင့် အလားတူပြီး အနောက်တိုင်းပြက္ခဒိန်အရ ဇူလိုင်လ (၂၃) ရက်မှ သြဂုတ်လ (၂၃)ဖြစ်သည်။ပါဠိစကား “သီဟ” ဟူသော သိဟ် (ဟိန္ဒူစကားတွင် Singha) ဖြစ်ပြီး အနောက်တိုင်း လက်တင်ဘာသာစကား “Lion“မှ “Leo”ဟုသက်ဆင်းလာကြသည်။ နက္ခတ်ရှုထောင့်အရ ကရဋ်ရာသီ(Cancer)ရဲ့အနောက်ဘက်နှင့် ကန်ရာသီ(Virgo)ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာ တည်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်ရဲ့ သိဟ်ရာသီဖွား ကိုယ်ပွားလေးပါ။သူ့ကို ကျွန်တော်အတွက် ခရီးသွားဖော်အဖြစ် ပါရမီဖြည့်ဘက်က သိဟ်ရာသီခရီးသွား လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုဆို ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးဖော်လေးက နှစ်ဝါကာလကို ရောက်ရှိသွားပါပြီ။တစ်ယောက်ထဲ ခြောက်ကပ်စွာ ခရီးနှင်နေရတဲ့ ကာလတွေထဲက လွတ်မြောက်သွားပြီး ခရီးဖော်အစုံနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ သိဟ်ရာသီခရီးသွားခြင်းက ပြည်ဝခြင်းအဓိပ္ပါယ်သို့ ရောက်ရှိနေသော “သိဟ်ရာသီရီဗောလူးရှင်း“(Leo Revolution) ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ “သိဟ်ရာသီဖွား”ပေါ့သူဟာလေ အားမာန်တွေ အပြည့်နဲ့ခရီးတွေ နှင်နေဆဲပါလေ။
ဒီရာသီလေးဟာ ကျွန်တော်ကို နွေးထွေးမှု အပြည့်အဝနဲ့စောင့်ကြိုနေဆဲပါ။ဆက်လက်ခရီးဆက်ဖို့ကိုပေါ့။နောက်ပြီး ကျွန်တော်သိတဲ့ ဘလောခ်ရေးသူတွေထဲမှ သိဟ်ရာသီရဲ့နောက်ထပ်ခရီးသည် ညီလေးတစ်ယောက် မွေးနေ့လေးပါ။ သူ့မွေးနေ့လေးအတွက် ဒီပိုစ့်မှာရေးထားတဲ့ကဗျာလေးက သူ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါ။ဒီကဗျာနဲ့အတူ ကျွန်တော်သိပြီးသော၊ မသိသေးသော၊ နောင်သိလာတော့မည့် သိဟ်ရာသီဖွားသူတွေ အားလုံးကို ပျော်ရွှင်သော “သိဟ်ရာသီ ခရီးသွား“တွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ ရက်တူလတူသော အဆိုတော် မက်ဒေါနားရဲ့ အေးခဲမှု (Frozen)ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ သိဟ်ရာသီထရိုင်မန်ရှင်းလေး (Leo Trimension)ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းလေးရဲ့ နှုတ်ဆက်မှု နိဂုံးလေးကတော့…………………………..။
သူ့မှော်အတတ်နဲ့ ဖန်ဆင်းပြခဲ့တဲ့ သူရဲ့စာလေးတွေ၊ကဗျာလေးတွေကိုဖတ်ပြီး သူကို လေးစားအားကျနေခဲ့တာ။နောက်ပြီး “သိဟ်ရာသီ ၀တ်ရုံ” ကဗျာကို အသက်သွင်းသွားသူကတော့ အကို”တာရာမင်းဝေ”ပါ။ သြဂတ်စ်မိုးစက်လေးတွေနဲ့အတူ အကိုကောင်းကင်ပေါ်မှာ အားလူးသွားစားနေတာ “နှစ်”နှစ်ပြည့်ကို သူ့ကို ချစ်ခင်လေးစားကြသူအားလုံးက တခမ်းတနား ကဗျာတွေဖွဲ့ စာတွေသီပြီးရေးသား ဂုဏ်ပြုခဲ့တာကို “ဒီနေရာလေးမှာ” တွေ့ရတော့ ကျွန်တော်လည်း သူများတွေလို အဖွဲ့အနွဲ့ မကောင်းတော့ နှုတ်တရာစာတလုံးဆိုသကဲ့သို့ ဒီလိုစာတိုလေးနဲ့ပဲ အကိုကို သတိတရ လွမ်းလိုက်ရပါတယ်။အကိုရဲ့ကဗျာလေးကို မြတ်နိုးစွာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘလော့ခ်နံရံပေါ် အပ်ခွင့်ပြုပါ အကို။
အငုံအဖူးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှတော့အပွင့်ဆက်ဖြစ်ရတော့မှာပေါ့ဒါပေမယ့်အဲဒီနေ့ကို ကျွန်တော့်ရဲ့သစ်ပင်ကလေးတွေပြန်ရောက်မလာကြတော့ဘူး။
မျက်နှာပေါ် ဖိနပ်မချွတ်ဘဲ တက်လာတဲ့အပြုံးကို‘မုန်းတယ်’သုည၀င်စားသလိုလိုနဲ့ ကိုယ်ကပဲ ကွေ့လျားဝိုင်းစက်ပြီးဆုံးသည်ထိတိုင်အောင် အိမ်ထရံမှီပြီးရှက်ရတယ်။
ခုတော့လည်း မဆင်မခြင် လိမ္မာလိုက်ပါပြီဂီတတွေကို ပိုပိုလိုလို တီးမှုတ်ယူမသွားတော့ဘူးမုယောအပွင့်ကလေးကိုလည်း မြေပြင်ဆီပြန်ပစ်ပေးလိုက်ပြီ။
၁၈း၀၀ နာရီ ရထားဟာလှလှပပကြီး တံခါးဖွင့်ဝင်ရောက်လာပါရဲ့ဒါပေမယ့်အဲဒီအိမ်ကလေးမှာ ဘူတာက သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတာကြာပြီ။ ။
Psး ကျွန်တော် လက်တလောသိသော သိဟ်ရာသီမွေးလရှင်များ-“မနှင်းနဲ့မာယာ“,”အမကေ“,”ညီမမေဇင်“,”ညီမနွေးနေခြည်“,”သူငယ်ချင်းသီဟသစ်“,”ညီလေးဧရာဝတီသား“
19 Comments: အပြုံးပန်း
August 9, 2009 at 12:58 am	>သိဟ်ရာသီဘွဲ့ကို လာဖတ်ပါတယ်၊သိဟ်ရာသီဖွား၊ နှစ်ဝါသားလေးက အတူတူရှိနေလား၊ ခြင်္သေ့တွေရဲ့ရင့်တဲ့လမှာမွေးတာပေါ့။သိဟ်ရာသီပန်းလေးကို ကိုယ်လည်းဒီမှာရေးထားတယ်။http://apyonepan.blogspot.com/2009/07/blog-post_22.html
August 9, 2009 at 2:27 am	>အစ်ကိုရေသိဟ်ရာသီ ခရီးသည်ကိုလာဖတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Leo ပဲခင်ဗျ။ ကြိုက်လို့ ကော်ပီကူးသွား ပါတယ် အစ်ကိုရေ။ ကျေးဇူးတင် ခင်မင်စွာဖြင့်
August 9, 2009 at 2:55 am	>မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာ သိဟ်ရာသီဖွားတွေရှိရင်လဲ ရေးပေးသွားကြပါဦးလို့…..။သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ဒီပိုစ်လေးကတော့ သိဟ်ရာသီဖွားတွေအတွက်ပဲ သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ သိဟ်ရာသီခံစားမှု ပြခန်းလေးပါ။ မည်သူမဆိုဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။
August 9, 2009 at 3:59 am	>အကိုရေ ကဗျာလေး လာပို.တဲ.အတွက် ရောတကူးတက လုပ်ပေးတဲ. အတွက်ရောကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ … ညီကအကိုကို ပြောဖူးပါတယ် ညီကို မေဖွား ပါခင်ဗျ…မေ၈ ပါ "TAURUS" ဖွားပါ … ညီရေးတော.အလိုဘဲရေးထားတာပါ ဒါပေမဲ. "Leo" လို.ဖြစ်သွားတာပါ … ဘာအမှားရှိလို.လည်းတော.မသိပါဘူးအကိုလည်း မေဖွားလို.ညီက ထင်တာပါ … ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ အကို ကဗျာအကြောင်းလေးရောဗေဒင် အကြောင်းလေးတွေပါ ဖတ်ရတဲ. အပြင် ညီကိုပါ.ခုလိုတလေးတစား အမှတ်ရပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါအကိုအမှားအယွင်းရှိရင်တော. ညီအပြစ်ဘဲ ဖြစ်မှာပါ🙂
August 9, 2009 at 12:24 pm	>သိဟ်ရာသီဖွားကဗျာလေးကိုခံစားသွားပါတယ် အကိုရေရှင်းလင်းပြထားတာနဲ့ ကဗျာလေးတွေက အရမ်းကောင်းတယ်နော်ပျော်ရွှင်ပါစေ ခြင်္သေ့ကြီးနဲ့ ခြင်္သေ့သေးသေးလေးရေဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်နော်
August 9, 2009 at 12:54 pm	>သိဟ်အကြောင်း သိကောင်းစရာတဲ့နောက်တစ်ခါ ကန်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာလုပ်ဦးဗျ။ ကိုချမ်းညီက ကန်ဆာနော်။ ဟဲဟဲ။ =P
August 9, 2009 at 12:58 pm	>အကိုရေသိတယ်ဟုတ်သိဟ်ရာသီ ခြသေ့င်္မလေးကို…အကိုနဲ့တူနေတာပေါ့နော်…ကေသရာဇာခြသေ့င်္တွေရဲ့ ခရီးလေးကို သဘောကျပါတယ်။အကိုပို့စ်လေးမှာ စုံစုံလင်လင်လေးဖတ်ရတယ်…ကျေးဇူးနော်…အခု အတွေးတစ်ခုထပ်ရသွားတယ်…ခြသေံင်္တွေက စာရေးဆရာတွေ များတယ်နော်…ဘလော့ဂါခြသေ့င်္လေးတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်…
August 9, 2009 at 1:03 pm	>အော်မေ့နေလို့ညီမချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါ မကေကလဲ လီယိုပဲသိလား…နှင်း
August 9, 2009 at 1:04 pm	>အော်မေ့နေလို့ညီမချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါ မကေကလဲ လီယိုပဲသိလား…နှင်း
August 9, 2009 at 4:48 pm	>သိဟ် ရာသီ ခရီးသည်အချိန်နာရီ ခရီးဝယ်မညည်းကွယ် တကယ်လျှောက်ဘယ်တော့မှ လမ်းမပျောက် ပါဘူး..လျှောက်သာလျှောက်…ေ၇ှ့ကို တည့်တည့်..
August 9, 2009 at 8:40 pm	>ကိုချမ်း ကိုချမ်း သမီးက Sagittarius နော်။ ဒီရာသီဖွားလဲ လုပ်ပါဦးဗျာ။
August 9, 2009 at 8:52 pm	>အလွန်လှသော အိမ်သစ်ဟာ ကိုချမ်းအိမ်လေးပါ။ မောင်ဝင်းကြည်ဘာတွေလုပ် နောက်ဖေး တကုတ်ကုတ်။တကုတ်ကုတ်နဲ့ မောင်ဝင်းကြည် ဟင်းတွေချက်နေသည်။ ကျက်လာရင် ကိုရေချမ်း အမုန်းဆွဲ မတဲ့လား။ ချောင်းမြောင်းနေသော လင်းကြယ်ဖြူ တပြုံးပြုံးနဲ့ကူ မောင်ဝင်းကြည့်ချက်သမျှ ဒိုင်ခံ တီးသတဲ့ဗျာ။။။။၀ါးးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးးးးးအိမ်သစ်လေး ကဗျာ လာစပ်တာဗျာ။အလုပ်ပေးထားတာ မေ့ပြီး ကိုချမ်းအိမ်ဘာလို့ ဝင်မရတာလဲ စဉ်းစားမရတာ… ခုမှ အဖြေတွေ့ သဗျ။။။ အရမ်းလှနေတယ် ကိုချမ်းရေ…. ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
August 10, 2009 at 1:32 pm	>သိဟ်ရာသီခရီးသည်ဖတ်သွားပါတယ်။ခိုင်ထူးရဲ.ခေတ္တာသီချင်းလေးကိုသတိရမိပါတယ။်စာပေသူငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်ပြီးအားပေးနေမယ်နော်။
August 10, 2009 at 10:39 pm	>သိဟ်ရာသီအကြောင်းဖတ်သွားပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတဲ့အတွက် ကိုချမ်းကိုလေးစားပါတယ်။သိဟ်ရာသီဖွါး ဘလော့ဂါမောင်နှမများ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေနော်။
August 10, 2009 at 11:34 pm	>:)….“သိဟ်”ရာသီလေးနဲ့ ရာသီဖွားလေးများအကြောင်းစုံစုံလင်လင်ကိုသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။စာအရေးအသားကိုတော့တကယ်ကိုအားကျလွန်းရပါတယ်။:)ခင်မင်လေးစားလျှက်..ခင်မာလာအောင်…
August 11, 2009 at 8:41 am	>ကျွန်တော်လည်း မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့စ်လေး တင်ထားပါတယ်။ ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီး ကိုယ်တောင် သိဟ်ရာသီဖွားမဟုတ်လိုက်တာ ခံစားသွားရတယ် ဟဲဟဲ။
August 11, 2009 at 11:11 am	>ကိုချမ်းလင်းရေHappy Birthday ပါဗျာနောက်တောင်ကျနေပြီ :Dသိဟ်ရာသီဖွားတွေ အကြောင်းသေချာဖတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရယ် နောက်ဘလော့ဂါညီမ နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွေးနေခြည် မေဇင်တို့ကလည်း leo တွေပါပဲခင်မင်စွာဖြင့်သီဟသစ်
August 11, 2009 at 11:16 am	>၀ါခေါင်မိုးနဲ့ရောက်လာပါတယ်…သိဟ်ရာသီဖွားတွေအကြောင်းတော့ သိပြီကျွန်တော့်လို မေလဖွားအတွက်တော့ နောက်တနှစ်မှ သိခွင့်ရမယ်ထင်ပါရဲ့…။
August 16, 2009 at 8:38 am	>ကိုချမ်းရေကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ သိဟ်ရာသီဖွားဖြစ်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ ရာသီတူ အကိုအမ မောင်ညီမလေးတွေကို သိခွင့်ရလို့လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။